AC Milan oo il gaar ah ku haysa arbaha Romelu Lukaku (Kooxo badan oo ku haysta!) – Gool FM
Tuchel oo ka jawaabay haddii ay kooxda Chelsea ka niyad-jabtay hanashada horyaalka Premier League
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Crystal Palace iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Arsenal iyo Burnley ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Tababare Pep Guardiola oo loo soo bandhigayo shaqada xul qaranka… (Waa kee xulka doonaya inuu hoggaamiyo Macallinka Man City?)
Xavi oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Kooxda Barcelona uga qeyb galaya kulanka caawa ee Deportivo Alaves
Kooxda Arsenal oo Macallin Mikel Arteta u soo bandhigtay heshiis cusub… (Waa meeqa sano?)
Christian Eriksen oo ku soo wajahan horyaalka Premier League, Kooxda uu ku biirayo & Saacadaha lagu dhammaystiri karo heshiiskiisa
Horudhac: Deportivo Alaves vs Barcelona… (Koox baxsad ka ah u laabashada heerka labaad, una dabaal dageysa 101 sano guuradeeda oo la ciyaareysa koox guul u oomman)
Horudhac: Chelsea vs Tottenham Hotspur… (Thomas Tuchel oo si cad ugu awood sheegtay Tottenham & ceebta ka heysata Spurs kulankan)
Horudhac: Real Madrid vs Elche… (Labadan naadi oo is arkay markii labaad muddo afar maalmood ah & Benzema iyo Courtois oo…)
AC Milan oo il gaar ah ku haysa arbaha Romelu Lukaku (Kooxo badan oo ku haysta!)
Raage March 15, 2017
(Milano) 15 Maarso 2017 – Wararka kasoo baxaya Talyaaniga ayaa tibaaxaya in AC Milan ay xiisaynayso inay dalab u dirsato qannaaska Everton ee Romelu Lukaku suuq-xagaagan.
Kooxda Rossoneri ayaa waxay bartamaha uga jirtaa wada xaajood daba dheeraaday oo lagu iibinayo taasoo lkn haddii ay hirgasho dakhli hor leh soo gelin doonta, haddii uu saxiixo dhco 7-da Abriil.
Sida uu dhigayo calciomercato.it, weerarkan reer Belgian ayaa taxa sare kaga jira laacibiinta ay bartilmaameedsanayso AC Milan, gaar ahaan kaddib markii ay soo bexeen warar sheegaya inuu diiday saxiixa qandaraas cusub oo ku sii hayn lahaa naadigan Merseyside.
Naadigan Premier League ayaa laacibka ku shukaaminaya qandaraas 5 sanadood ah oo uu todobaadkii ku qaadanayo £140,000 oo gini, iyagoo ku qiimaynaya €80m oo euro, balse AC Milan ayaa hardan ka wajahaysa Chelsea, Manchester United, Arsenal, Atletico Madrid iyo PSG oo wada doonaya 23-jirkan.
''Juventus way ka wanaagsan tahay Roma'' - Corentin Tolisso
GOOGOOSKA: Juventus FC vs FC Porto 1-0 (3-0) (Bianconeri oo usoo baxday 8-dhamaadka CL)